app ganacsiga Crypto Robinhood oo bilaabay in Colorado - Blockchain News
muuqaalka tartanka is dhaafsi cryptocurrency waxaa horumarinta ee dalka Mareykanka. sarrifka xawaaladaha Robinhood kaliya ku dhawaaqday Twitter ballaarinta galay Colorado. madal ganacsiga ayaa soo bandhigay ganacsiga Guddiga la'aan ah Seeraar ee Colorado.
Waxa intaa dheer in cryptocurrencies, Palo Alto ee, madal ganacsiga Calif. ku salaysan sidoo kale taageertaa kaydka, ETFs iyo fursadaha.
Colorado, oo loo yaqaan for danbow ay Rocky Mountain iyo sharciga blockchain-friendly, Ugu Biiray muggeed oo ka mid ah dalalka in fidiyaa si California, Massachusetts, Missouri iyo Montana, kuwaas oo dhammaantood Robinhood ku daray oo qayb ka ah fulinta ah in ay la socdaan dhaqaaqin gobolka-by-state horraantii April.
The dhacdooyinka ugu muhiimsan ee 2...
koritaanka fiiqan Seeraar ayaa, IC ...
Post Previous:Seeraar ATM network Coinsource la Acuant-factor multi authenticator u shaqeeyo
Post Next:Iran rasmi ah oo mamnuucday isticmaalka cryptocurrencies
urolino ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 18, 2018 at 2:37 AM
Johnc801 ayaa sheegay in:
Smithd ayaa sheegay in: